६ सय ५१ म्यानपावरले फ्री भिसा र टिकटको विवरण बुझाए, कति चल्ला बार्गेनिङ्ग ?
देशब्यापी सडक आन्दोलन गर्ने कांग्रेसको घोषणा
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुला फ्रि वाइफाइ जोन क्षेत्र घोषणा
कञ्चनपुरमा यात्रुवाहक भ्यान एक आपसमा ठोक्किदा दुई जनाको मृत्यु, ११ जना घाइते
मलेरीया रोगबाट मुगु नेपालकै उच्च जोखीममा
विदेश जाँदा र विदेशबाट फर्कदाँ बोक्न पाउने नगदको सिमा तोकियो, कति बोक्न पाउने ?
सन्राइज बैकले पर्यटक प्रवेश काउण्टर संचालनमा ल्यायो
राष्ट्र बैंकले यी १४ सहकारीलाई नियमनबाट हटायो
निकै फरक प्रस्तुतिको साथमा यसरी देखा परिन् रेखा थापा (भिडियो)
कार्टुन्ज क्रुले ल्यायो अहिलेसम्मकै फरक प्रस्तुति, यसरी नाचिन् प्रियंका (भिडियो)
मिस नेपाल नर्थ अमेरिकाकि आधिकारिक होस्ट नग्मा श्रेष्ठले गर्दै
नेपाली चलचित्र ‘कायरा’को गीत सार्वजनिक (भिडियोसहित)
‘नाई नभन्नु ल ५’ को ट्रेलर नम्बर १ ट्रेन्डिङमा (भिडियोसहित)
भारत र पाकिस्तानको शक्तिको सामु नेपाल कति शक्तिशाली ?
व्यवस्था र नेतृत्वले हैन मनोस्थितीले मात्रै व्यबस्थापन सम्भव हुन्छ
प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्न बेलैमा सजग बनौँ
एनजीओबाटै पार्टी चलाउन सजिलो ! नत्र हजारौं कार्यकर्ता कसरी पाल्ने ?
Posted on: 17 Apr, 2017
वैशाख ४, काठमाडौं । बैदेशिक रोजगार बिभागले म्यानपावरहरुलाई पटक-पटक विवरण बुझाउन ताकेता दिएपछि ६ सय ५१ म्यानपावरले बिभागमा विवरण पेस गरेका छन् ।
बिभागले ३ पटक समय दिएर विवरण मागेकोमा २ सय भन्दा बढी म्यानपावरहरुले भने कामदारको विवरण पेश गर्न अटेर गरेका छन् । बिभागले तेश्रो पटकसम्म दिएको समय सिमा आइतबार सकिएपनि केहि म्यानपावरले बिबरण पेस गरेका छैनन् । नेपालमा अहिले ७५० भन्दा बढी म्यानपावर सक्रिय रुपमा संचालित रहेकोमा ६ सय ५१ म्यानपावरले मात्र फ्री भिसा र टिकटको विवरण बुझाएको बिभागले जनाएको छ ।
कुन-कुन म्यानपावरले विवरण बुझाएनन् भन्ने बारेमा बिभागले केहि समयपछी सार्वजनिक गर्न सकिने जनाएको छ । बिभागले अझै म्यानपावरले विवरण पेस गर्न सक्ने समेत जनाएको छ । विभागले पाएको विवरणलाई छानबिन गर्न समेत सुरु गरेको बताएपनि छानबिन पछी नियमसंगत संचालित नभएका म्यानपावरलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने बारे भने कुनै निर्णय लिएको छैन ।
विभागले मागेको विवरण अनुसार कामदारको विवरण, देश, कम्पनी, सेवा शुल्क बापत उठाएर बैंकमा जम्मा भएको रकम, विदेशी कम्पनीले टिकटबापत दिएको रकम र हवाइ टिकट र कादार पठाएको एयरलाइन्सको सबै विवरण पेस गर्नु पर्ने हुन्छ ।
कति चल्ला बार्गेनिङ्ग ?
म्यानपावरले बुझाएको विवरण अनुसार झुटा भए बिभागए एन/नियम अनुसार कारबाही गरिने बताएपनि कतिपयले यसमा बिभागकै केहि कर्मचारीको बार्गेनिंग समेत चल्नसक्ने आशंका गरेका छन् । निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयन नभएको गुनासो आएपछी बिभागले विवरण मागेको थियो तर कागजी रुपमा नदेखाई म्यानपावरले विदेश जानेसँग पैसा अशुल्ने कुरा बिभागले थाहा भए-नभएझै गरेको छ । लाखौ असुलेर म्यानपावरले १० हजारको मात्र कागजी प्रमाण दिन्छन् भन्ने कुरा बिभागका हरेक कर्मचारीलाई थाहा छ तर विभागसँगै म्यानपावरहरुको मिलिमतो हुने कारणले उक्त बिषयमा बिभाग थाहा नभएझैँ मौन छ ।
पछिल्लो समय बिभागले मागेको विवरण मिलाउन लगभग सबैजसो म्यानपावरलाइ हम्मे-हम्मे परेको छ । अधिकांश म्यानपावरले लेखापढी गर्नेहरुलाई पैसा खुवाई विवरण बनाएका छन् भने केहि म्यानपावरले भने अझै विवरण बुझाउने कुरामा अन्यौलता भएपछी विवरण नै पेस गर्न सकेका छैनन् । बिभागले एक्कासी सोच्दैनसोचेको विवरण मागेपछी केहि म्यानपावरहरु भने ब्यबसायनै गुम्ने डरमा छन् ।
एक म्यानपावर ब्यबसायीले विवरण बारे हाम्रो प्रश्नमा विवरण नबुझाएपनि हुने र बिभागले केहि गर्न नसक्ने दावी गरे । उनि जस्तै केहि ब्याबसायीहरुले बिभागले विवरणको नाममा म्यानपावरसँग पैसा अशुल्दै कमाउने नयाँ तरिका अपनाएको आरोप लगाउने गरेका छन् । यस बिषयमा अझै स्पष्ट के पनि छ भने किन २०० भन्दा बढी म्यानपावरले अझै विवरण बुझाएका छैनन् ? विवरण नबुझाउने म्यानपावर कुन-कुन हुन्, बिभागले किन सार्वजनिक गरेको छैन ? किन तिनीहरुलाई बिभागले समयसिमा सकिदासम्म कुनै कारबाही गर्ने नीति लिएको छैन ? अचम्मको बिषय छ ।
कागजी रुपमा १० हजारको रसिद थमाएर लाखौँ लुट्ने बानी परेका म्यानपावरले कस्तो विवरण बुझाए ? बिभागले कसरी त्यस्ता विवरणलाई पास गर्छ ? पास नहुने म्यानपावरलाई कस्तो कारबाही होला ? पत्याउनै नसकिने विवरण पास गराउन कतिसम्मको बार्गेनिङ्ग चल्ला ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
हामी निरन्तर यस बिषयको खोजमा रहनेछौं....
एनसेलले ल्यायो ३ महिने झकास अफर, यस्ता छन् सुबिधा ! यसरी सुचारु गर्नुहोस्
नेपाल टेलिकमद्वारा मनसुन अफर, साउन १ गतेदेखि लागु हुने
सामसुङले ल्यायो नयाँ स्मार्टफोन, यस्ता छन् विशेषता !